Top 20 iMovie Atụmatụ Ị gaghị agbaghara e
iMovie bụ a na ncherita-iru nkiri nchịkọta akụkọ ma a omume mepụtara ga-eji Mac OS, na enwekwukwa atụmatụ maka agbakwunye n'okirikiri gị na obere vidiyo. Ebe ọ bụ na ya inception ya arahụ site ọtụtụ mgbanwe na-enye ya ihe mmezi onu na-adịghị agwụ agwụ mmetụta na nwere ike ị chọrọ ide. Na ya pụrụ iche atụmatụ i nwere ike iji ihe ndị a aka gị videos ke laa.
iMovie-abịa bundled na ọ bụla version nke Mac OS ma ọ bụ nwere ike zụrụ si App Store dị ka mma.
Itinye na mmetụta na-iMovie-agụnye ndị na-esonụ eluigwe na ala nzọụkwụ.
Ibu Ibu clip
Họrọ otu mmetụta
Gbasoo mmetụta ka clip
Zọpụta na ịkọrọ gị enwekwukwa clip
Ndị na-esonụ mmetụta ndị ụfọdụ n'ime ọtụtụ na ị ga-ezute dị ka ị ga-amalite iji iMovie.
Part 1: Top 20 imovie mmetụta
Part 2: Olee iji nweta ihe iMovie mmetụta
Nnọọ uru mgbe ị na-enwe nchegbu banyere àgwà nke ụda na ị chọrọ ka gị clip dị ka i nwere ike ịgbanwe ụkpụrụ omume nke ụda si onwunwe soja.
Ibu Ibu gị clip
Ịdọrọ gị clip n'ime oru ngo window
A obere cog ga-egosi na a họrọ clip na-dezie
Pịa na cog iji bugote esonụ menu
Pịa na audio mgbanwe
Onye soja window ga-emeghe elu n'ihi na ị na tinye dị ka ọtụtụ nhọrọ dị ka ị na-ahọrọ
Tinye ụkpụrụ dị ka ị na-egwu ndị clip iji nweta nri mgbanwe
Green / Blue ihuenyo mmetụta
Green ọ bụ anụnụ anụnụ meziri na-eji superimpose mkpachị na-dere iche iche. Anyị na-eji akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ anụnụ anụnụ ndabere dị ka nke a na-enye ohere nghọta na Ya mere ka ọ dị mfe na-eji dochie agba na ndị kwesịrị ekwesị mma dị ka ndabere.
Mbubata gị nkiri site na ịpị File> Bubata> Movies
Kwado Advanced Ngwaọrụ ọrụ site na ịpị mmasị menu
Na ị na-elele window kpatụ okpokolo agba nke clip site na-adọkpụpụta nkuku anọ nke clip
Gbanwee dị ka ị hụchalụ na-chọrọ N'ihi
Pịa 'na-eme' na n'elu aka nri nke ihuenyo
Ihe karịrị nanị na-agbakwunye otú gị mkpachị na-esi n'otu clip na-esonụ, iMovie-enye ndị ọzọ nkenke na-esi enweta ya na na a ire ụtọ n'ụzọ.
Ozugbo mkpachị e kwajuru na usoro iheomume, họrọ mgbanwe ị chọrọ site abụọ na ịpị na ya
Pịa na mgbanwe bọtịnụ-enye gị soja mkparịta ụka
Dịnụ mgbanwe ga-ugbu a-egosi na soja window
Si ebe a ị nwere ike ịgbanwe oge na ụdị usoro gị mkpa
Ozugbo ị na-mere-eme mgbanwe, pịa 'Mee ka All ikwu n'ụzọ' button itinye họrọ ikwu n'ụzọ
Ọtụtụ audio mmetụta dị ịhọrọ site nye gị video a kenha ụda mmetụta.
Ibu Ibu a video na nwere ụfọdụ audio na ya ka Project Library
Pịa na obere 'gear' na akara ngosi na họrọ clip ma họrọ Clip Mgbanwe
Ị kwesịrị ị na ugbu a nwere soja window dị ka e gosiri oyiyi n'okpuru. Pịa na Audio mmetụta bọtịnụ.
Ka anya dị ka ị pịa na Audio Mmetụta button, ị ga--esonụ na ihuenyo
Hover gị òké n'elu dị iche iche mmetụta ikpebi na nke otu onye na-eji
Họrọ ma na-etinye
Nke a bụ mmetụta etinyere neutralize ọzọ na-achọghị mmetụta na mere n'oge edezi nke a clip dị ka na-achịkwaghị achịkwa ìhè, bịara ikiri mmetụta ma ọ bụ achọghị ụda wdg
Mbubata clip na-Project Library na mgbe ahụ gaa Njikwa> Tụlee Video> Stabilization
Chere maka stabilization rụchaa dị ka kwa mmasị gị
Ndị a bụ mmetụta na melite ogo nke ihe nkiri ahụ. Ị nwere ike ịhọrọ adị n'elu ma ọ bụ jiri ala a clip ona gị chọọ.
Tinye ụfọdụ mkpachị gị oru ngo window
Gaa Ohere> Gosi ukpụhọde
Pịa na dị iche iche visual mmetụta si Video Mmetụta window
Pịa na ike itinye gị họrọ video mmetụta mgbe Michael
Voice overs na-eji na-enye a onye aka gị clip. iMovie enyere otu ime otú enweghị ezighị ihe mbụ ọdịnaya.
Nzọụkwụ aka (iPhone / iPad)
Mepụta gị nkiri na iMovie
Ịgbakwunye mkpachị ka media usoro iheomume
Swipe ekpe ma ziri ezi-egosiputa na play isi n'elu isi ihe ị chọrọ itinye olu ahụ nke si
Enweta na okwu na akara ngosi na ala n'aka nri nke ihuenyo
Play gị ndekọ ka ịhụchalụ ya (na ị nwere nhọrọ nke re-ndekọ site na ịme ọpịpị na ileghari bọtịnụ)
Mgbe ahụ enweta na-anabata iji tinye olu gị ndekọ
Kama nke na-eke utu aha maka onye ọ bụla na ihe ọ bụla clip na ị dezie, iMovie-enyere gị aka oyiri utu aha site na otu clip ndị ọzọ.
Pịa na thumbnail nke clip na oru ngo onyenlereanya window
Pịa na ederede igbe na-ekiri window iji họrọ ederede
Site Dezie menu, pịa oyiri
Pịa na abụọ clip iji họrọ ya
Ịdọrọ aha jidesie nke abụọ thumbnail itinye ya n'ọrụ
Pịa na Dezie menu ọzọ
Pịa tapawa mado aha n'ime abụọ clip
Akụkụ site n'akụkụ ihuenyo edezi
Ohere ọrụ na-ekiri abụọ meziri n'out oge. Ị nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ playback nhọrọ. Onye ọrụ nwere ike kewaa meziri dị iche iche ihe dị ka a ekwentị mkparịta ụka na a clip.
Kwado ndị Advanced Ngwaọrụ site n'isi na-mmasị window na ịlele igbe
Emeghe gị oru ngo
Ịdọrọ clip ịchọrọ ịgbakwunye dị ka akụkụ clip [ruo mgbe ị na-ahụ a gbakwunyere (+) nnọchianya]
Hapụ òké bọtịnụ
Dobe ala menu ga-apụta, họrọ 'Akụkụ site Akụkụ' nhọrọ
Ime mgbanwe iji dabaa na mmasị gị
Agbakwụnye ndepụta okwu na Ebe E Si Nweta
Ndị a bụ akụkụ na-gosiri na ihuenyo na-anọchi anya ihe a na-kwuru na a clip. Ha na-Elezie gosiri ma na n'elu ma ọ bụ na ala nke ihuenyo. Ị nwere ike tinye ndepụta okwu gị clip site na iji kọmputa ede na a ederede. Ebe e si nweta bụ akụkụ na-egosi na mmalite ma ọ bụ na ọgwụgwụ nke a clip ma n'ihi na ekele ma ọ bụ nkweta.
Mbubata gị nkiri n'ime ihe omume nchọgharị site na-adọkpụpụta mkpachị ngo
Pịa na 'T' akara ngosi na ala akụkụ nke window iji nweta ndepụta nke ederede ekwekọghị
Ịdọrọ họọrọ ịke n'ime oru ngo, mgbe ahụ pịnye na sobtaitel
I nwere ike igosi ndị ọzọ formatting gị chọọ
Ịhụchalụ gị videos na n'elu afọ ojuju, ịgbanwe ebe utu aha ga na-amalite na-akwụsị na site Anam Udeme uhie rektangulu ya
Jikọọ Movie mkpachị
Ị nwere ike ikpokọta abụọ ma ọ bụ karịa mkpachị na-consecutive. Nke a na atụmatụ na-enyere gị aka bechapụ iberibe na ị na-adịghị mkpa na clip.
Emeghe ọhụrụ oru ngo
Pịa na File> Bubata iji mbubata fim
Ịdọrọ na dobe mkpachị ị chọrọ isonyere ngo window na iji ị chọrọ ka ha na-egosi
Mbupụ ngo dị ka otu clip, pịa òkè na ịhọrọ nhọrọ na kasị mma suut ị
Ị nwekwara ike ịhọrọ ọkụ nkiri
Fadein, Fadeout mmetụta
Nke a bụ atụmatụ na-enyere aka na smoothening video na ọdịyo ikwu n'ụzọ.
Họrọ clip si oru ngo window
Pịa na gear button na pịa Clip Mgbanwe
Press na 'Audio' taabụ
Ka ichabo na ma ọ bụ ịjụ oyi si, ịdọrọ sliders-ekpe ma ọ bụ nri
Akuku na bugharia
Nke a na-enyere gị na bee efep n'ọnụ nke video iji mee ka na akụkụ na ị chọrọ. Mkpa ka ị bugharia a clip na-na a ọnọdụ, karịsịa ma ọ bụrụ e weere na a dị iche iche na ihuenyo usoro.
Mepee oru ngo window
Mgbe n'elu n'akụkụ aka ekpe, pịa na akuku button
Dọga resize na reposition akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ etiti ruo n'ókè ị chọrọ
Ị pụrụ ime ka ọ ibu ma ọ bụ nta
Iji bugharia clip, see na bugharia buttons
Pịa na Emela rụchaa
Enye gị ohere na-egwu abụọ videos n'out oge, ebe isi ihuenyo-ewe ibu ngalaba dị ka ndị ọzọ clip ewe a nta window.
Pịa na Mmasị menu n'okpuru iMovie menu
Tụgharịa na Advanced Ngwaọrụ
Ibu Ibu clip ị chọrọ dezie na ihe omume nchọgharị
Right clip maka a menu ka gbapụta
Họrọ foto na foto
Ịgbanwe ọnọdụ nke clip site na-adọkpụpụta ya ebe ị chọrọ ya enịm
Gbanwee na ịhụchalụ mgbe ahụ n'ihu na ịpị on Emela rụchaa
Adị n'elu / akwụsịlata mkpachị
Na adị elu ma ọ bụ akwụsịlata a nkiri a na-eme iji nweta ụfọdụ mmetụta n'oge edezi
Mbubata gị clip ngo window
Ugboro abụọ click na clip na-ewetara ndị soja window
Ịdọrọ ndị na-agba mmịfe-ekpe ịkụda ndị clip na aka nri ntọt ya ọsọ
Ego agbara nhọrọ maka backward play
Mmetụta na-dozie ma ọ bụ mee ka mmetụta nke ìhè na a clip. Anyị na-ejikwa akpaaka ziri ezi na-enye oru ngo ezi agba.
Mepee iMovie mmasị
Ugboro abụọ click na clip iji bugote soja window
Pịa na Clip Mgbanwe
Site soja, pịa na video taabụ
Gbanwee na agba okè dị ka ị na-eji na-elele window na-ele results
Wuru na gburugburu na-eji ike pụrụ iche anya. Ị nwere ike itinye na dezie ikwu n'ụzọ aka. iMovie gburugburu na-ejedebeghị na nọmba. Ị nwere ike mkpa iji iDVD iji nweta ihe gburugburu maka iMovie.
Nweta iDVD isiokwu na-amasị gị
Zọpụta họrọ isiokwu site na ịpị File> Chekwa Ka ...
Nye isiokwu a aha
Tọghata isiokwu-atụkwasịkwara iMovie
Ndenye mmegharị nke igwefoto nwere ike ime ka blurry oyiyi mgbe Ndekọ otú aha inyefe shutter distortion. Ị nwere ike iji iMovie ịgbazi a dị ka ndị a.
Ibu Ibu iMovie
Họrọ bịara ikiri clip site na ịpị ya
Pịa na Gbanwee button
Pịa na 'Idozi Rolling Shutter' igbe
Ihuchalu gbanwee nkiri wepụ blurring mmetụta
Zọpụta clip ma na-eso
Download faịlụ - http://imoviehowto.com/footage/GreenScreenElectricity.mov.zip
Gaa Njikwa> Bubata iji mbubata clip na ị dị nnọọ ebudatara
N'otu aka ahụ, mbubata video ị ga-achọ ka ịgbakwunye ọkụ eletrik mmetụta na mgbe ahụ ịdọrọ ya jidesie ngo window
Ugbu a, ịdọrọ ọkụ eletrik footage na unu ebudatara n'elu nke video na họrọ Green ihuenyo nhọrọ si popup menu
E nwere ọtụtụ nke weebụsaịtị ebe ị pụrụ ịmụta ihe banyere ndị ọzọ na iMovie mmetụta. Anyị depụtara ụfọdụ n'ime ndị kasị mma si n'ebe maka gị. Were a anya.
Agbazi blurry ma ọ bụ agbagọ vidiyo site na iji inyefe shutter atụmatụ
2. Special mmetụta iMovie
Na-enye ndepụta nke isi iMovie mmetụta na otú na-aga banyere ha na-eji nzọụkwụ site nzọụkwụ osise
3. Rain Mmetụta
Na-ewe gị na nzọụkwụ on otú ike a mmiri na-ezo na gburugburu ebe obibi na a clip
t Na-enye nduzi na-esi ike ma ọ bụ tinye video mmetụta
5. Ihe tech
iMovie video mmetụta iji esereese
> Resource> iMovie> Top 20 iMovie mmetụta maka ị